AMBALAKONDRO BRICKAVILLE : Trano roa sy fiara Mercedes Sprinter iray kila forehitra
Andro antoandrobe nanahary, nijoalajoala indray ny afo tao an-tampon-tanànan’i Brickaville, tao amin’ny Fokontany Ambalakondro, ny marainan’ny alakamisy 29 jona, tokony ho tamin’ny 9 ora. 30 juin 2017
Tranohazo roa lehibe, manana rihana no ireto may ireto. Tsy fantatra mazava tsara ny tena antony niavian’ny afo fa setroka efa midonaka no nanaitra ny tao an-trano sy ny manodidina.
Avy hatrany, dia nifarimbona ny fokonolona namono ny afo ary voatery noravana ny trano vitsivitsy manodidina mba tsy hitaran’ny afo.Fatiantoka tsy hita noanoa no niseho, tombanana ho 200 tapitrisa Ariary ny entana may tao anatin’ireto trano ireto.
Ankoatra ireo entana mantsy dia kila forehitra tao ihany koa ny fiara Mercedes Sprinter iray.Anisany nampanano sarotra ny fifehezana ny afo tsy fananan’ny sampandraharaha ny mpamonjy voina fitaovana. Ny zava-misy dia manana birao io sampana mpamonjy voina ao Brickaville io, fa ny fitaovana no tsy misy, ka ny herim-pon’ny fokonolona no mifehy ny hain-trano rehefa misy tranga ao Brickaville ao.